🥇 ▷ Dabox: CGD & # 039; s Tababaraha Tababaraha Shakhsiyeed ee Xisaabaadkaaga ✅
Dabox: CGD & # 039; s Tababaraha Tababaraha Shakhsiyeed ee Xisaabaadkaaga
CGD ayaa maanta soo bandhigtay barnaamijka ‘DABOX’, hal-abuurnimo u gaar ah suuqa Boortaqiiska. Barnaamijkan ayaa ah natiijada maalgashiga isbeddelka casriga ah ee Bangiga.
Iyada oo la adeegsanayo barnaamijkan CGD macaamiisha hadda waxay marin u heli karaan tababbaraha shaqsiyadeed ee shaqsiga taleefanka gacanta. Barnaamijkaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso go’aano lacageed oo ka sii fiican oo aad ka warheleyso.
Dabox – Hal maamule oo u shaqeeya dhammaan baananka
Aaladda ‘DABOX’ waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay ku daraan xisaabaadka dalabka bangiyada waaweyn ee ka shaqeeya Portugal. Sidan ayey macmiilku aragti mideysan ugu leeyihiin helitaankooda dhaqaale.
Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah iyo ilbiriqsiyo ah, uga mahadceliso mashiinka falanqaynta xoogga leh, dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada waxaa loo kala qaybiyey, tusaale ahaan, Guriga, Cuntada, Gaadiidka, Dukaamaysiga, Waqtiyada firaaqada iyo Caafimaadka, iyo kuwo kale.
CGD waxay ujeedadeedu tahay inay isu dhigto sidii cayaaryahanka ugu weyn ee dhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa Bangiga furan (Open Banking dhaqdhaqaaqa) suuqyadeena iyadoo dhiirrigelineysa dhaqammo cusub oo ku saabsan maaraynta nolol maalmeedka ee Boortaqiiska, oo ay ku jiraan maareynta maaliyadda shaqsiyadeed.
Barnaamijka ‘DABOX’ waa hal abuur u gaar ah suuqa Boortaqiiska, waana natiijada ka dhalatay maalgashiga isbeddelka dijitaalka ah ee Bangiga.
App-ka waxaa laga heli karaa App Store iyo Google Play oo loogu talagalay macaamiisha CGD ee leh qandaraasyada firfircoon ee Caixadirecta. Waxay kaa siinaysaa fahamka dhammaan xisaabaadka aad ku leedahay CGD iyo Bangiyada kale, isla markaana dhaqso ayey u heli doontaa dhammaan macaamiisha aan CGD ahayn.
Sidoo kale akhri …